प्रिन्सिपलबाट सन्देश – श्री नवोदय माध्यमिक विद्यालय
पारदर्शीताको बारेमा विद्यालयको कुन श्रोत बाट के आउछ ? र कसरी खर्च गर्ने हो ? भन्ने बारे पनि थाहा नभएको अवस्था रहेछ, त्यसको विद्यालय अनुदान कार्यान्वयन सहयोगी पुस्तीका भनेर विभिन्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति लाई प्रदान गर्ने गरेका छौ । म विदाको दिन पनि शिक्षाकै काममा बढी व्यस्त रहन्छु । काठमाण्डौमा खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु लगाएतका थुप्रै गतिविधि हरुमा भ्याए सम्म सहभागी हुने गरेको छु ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरुको मनोवल उच्च बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि हामी लागेका छौ । त्यही क्रममा विद्यालय सुधार योजना लाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेका छौ ।
म आजको यूवाहरुलाई के भन्छु भने विश्वविद्यालयको शिक्षाले मात्र त्यो कितावमा लेखिएको कुरा पढ्दैमा मात्र केही हुदैन, त्यसलाई रियल लाइफ सँग जोडेर जान सकियो भने मात्र अवको पुस्तामा शिक्षाको प्रभावकारीता बढ्दै जाने देखिन्छ । सकारात्मक धारणा सहित अध्ययन र कर्ममा लाग्नुपर्छ । यो हाम्रो देश अरुले परिर्वतन गरिदिने होइन हामी आफैले परिर्वतन गरि सुन्दर अनि सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । हामी नेपालीहरुकै ज्ञान र विश्वका प्रयोगहरुलाई लिएर हरेक नागरिकहरु, यूवाहरु अगाडी बढन निकै आवस्यक देख्छु मैले ।